Ọdịmma Ahịa AASraw
Maka ogo nke AASraw, anyị nwere ike ịhụ okwu anyị "Genius ngwongwo" pụtara ya. Maka ndị nwere steroid na-esi nri ma ọ bụ ndị nwe ụlọ nyocha, site na ọdịdị na isi na ụfọdụ anụ ahụ ndị ọzọ, ha nwere ike ịsị na ngwongwo ahụ bụ ndị amamihe ma ọ bụ ndị ọjọọ. Mana iji nyere ụfọdụ aka ọhụrụ aka, A na-ekwe nkwa akụrụngwa niile sitere na AASraw maka ịdị ọcha na-erughị 98%, imirikiti ngwongwo ndị ahụ dị ọcha 99%. Enwere akụkọ nyocha HPLC na COA dịka nkwado bụ isi maka nkwa anyị. Na, anyị na-agba ndị ahịa anyị zụrụ aka ka ha nwalee uzuzu site na Laboratories mpaghara ha ma anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ maka ụgwọ yiri ya.